Malunga nathi-Shenzhen Junankang Medical Technology Co, Ltd.
I-Shenzhen Junankang Medical Technology Co., Ltd. yasekwa ngo-Agasti 2004. Yinkampani yobungcali enikezelwe kuphando kunye nophuhliso, ukuveliswa kweemveliso zonyango ezifanelekileyo. Ishishini lesizwe eliphezulu-lobugcisa elidibanisa imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo.
Iimveliso eziphambili zezi: inkqubo yolawulo yovavanyo lomzimba okrelekrele, itheminali yokuzenzela inkonzo (iYitong yesilivere), iYizhangtong, indawo yokuprinta eyenzela inkonzo, ifilimu entsha yezonyango (i-laser, i-thermal, i-inkjet), ifilimu yefu ye-elektroniki, ifilimu yezonyango Njengeziprinta zemifanekiso ( I-laser, i-thermal, i-inkjet), abavuni bokuzenzela iifilimu. Kwi-2015, wafumana utyalomali lobuchule kwi-capital eyaziwayo yeXiantong Capital. Kwakuloo nyaka mnye, wafumana utyalo-mali kwi-Shenzhen Science and Technology Bureau.
Inkampani inamalungelo awodwa omenzi wechiza esizwe, imodeli yokusetyenziswa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza, amalungelo obunini esoftware kunye nelungelo lokushicilela. Ngaxeshanye ukufumana izatifikethi ezibini zelayisensi yemveliso yezixhobo zonyango kunye nelayisensi yeshishini, sisiseko seLizwe sokuNcitshiswa kweNtlupheko, iSiseko seZiko lezeMpilo, iShenzhen Strategic Partner yamashishini awaziwayo kwilizwe jikelele nakwamakhaya kunye namaziko afana neMindray Medical, iShenzhen ZTE, iShanghai United Ukufanekisa, njl njl, baneSibhedlele saBantu bePhondo laseHenan, iSibhedlele saZhengzhou, iSibhedlele saBantu saseShenzhen, iSibhedlele esiDibeneyo seYunivesithi yaseTekhnoloji, iSibhedlele esiQheleneyo somkhosi waseShenyang, iShenzhen Bao ngabantu besithili Isibhedlele Isibhedlele, iHainan Sanya's People's Hospital, iSibhedlele saBantu baseJijiang City, iZibo Central Hospital kunye namanye amaziko onyango kwilizwe liphela ngabathengi abasemgangathweni.
I-2019 Umatshini wethebhulethi yokuzenzela inkonzo uphumelele iimveliso ezilishumi eziphezulu kumatshini wokuzenzela iinkonzo waseTshayina.
Isetyenziswa kulungiso lwangaphakathi nolusebenzayo lweshishini (yinyitong umatshini wokuzenzela), ukuvavanywa kwesebe lonyango, ukuprinta kwengxelo nokubopha esetyenziselwa ukufotwa kwe-X-ray ukurekhoda imifanekiso ye-radiographic yoxilongo lweklinikhi (ifilimu yezonyango); esetyenziswa ngokudibeneyo nefilimu yezonyango yokuNceda ukuprinta ifilimu kunye nokusetyenziswa kwengxelo
Isatifikethi se-3C, isatifikethi sikazwelonke sobugcisa obuphezulu, ilungelo lobunikazi, isoftware, irekhodi lemveliso yezixhobo zonyango, ilayisensi yeshishini lezixhobo zonyango
Iyaqatshelwa liZiko leSizwe laseTshayina lokuNcitshiswa kweNtlupheko, iSiseko seZempilo esiSiseko, iShenzhen Mindray Medical, iShenzhen ZTE, iShanghai United Imaging, njl.njl. Isibhedlele saseShenzhen, iSibhedlele saBantu baseShenzhen, iSibhedlele iYunivesithi i-Hebei Engineering, iSibhedlele i-Shenyang Army General, i-Shenzhen Bao yi-People's District Hospital, i-Hainan Sanya People's Hospital, i-Jiujiang City People's Hospital, Abathengi abakumgangatho ophezulu abasuka kumakhulu amaziko ezonyango kwilizwe liphela afana neZibo Central Hospital. Ngo-2019, umatshini wethebhulethi ozenzela inkonzo ufumene i-China Medical Self-Service Machine Imveliso ezilishumi.